Ikhosi yaabantu abadala enoxanduva | Inkqubo yokuQinisekiswa kweZiko kwi-Intanethi ekusebenzeni nabantwana
Ikhosi yaabantu abadala enoxanduva
Inkqubo yokuQinisekiswa kweZiko kwi-Intanethi ekusebenzeni nabantwana
Olu qeqesho lweyure ye-20 kwi-intanethi lwenza ukuba abantu abafuna umsebenzi bafumane izakhono eziyimfuneko ukuze basebenze nabantwana kwizibonelelo zononophelo lwabantwana okanye kwizikolo kwi-BC.
Ngeeseshoni ezisebenzisanayo, Ikhosi yeNtloko yaBadala ekwi-Intanethi igubungela imixholo esisiseko malunga nokukhula komntwana ukusuka ekuzalweni ukuya kwi-12 yeminyaka yobudala, isikhokelo, ezempilo, ezokhuseleko nezesondlo.
Urhulumente waseBritish Columbia ngoku wayalela ukuba uqeqesho lwekhosi yabantu abadala lube noxanduva kubo bonke abantu abasebenza nabantwana.
Le khosi yaBantu abaDala ekuHlaleleni abahlangabezana nayo Umthetho wokuLayisenisa abaNtwana abaDala we-BC Iimfuno zabantu ababodwa kufuneka okungenani babe neeyure ze-20 zoqeqesho lokugcina abantwana kubandakanya ukhuseleko, ukukhula komntwana kunye nesondlo ukuze usebenze nabantwana.
Uqeqesho lwekhosi yethu yabadala abaDala kwi-Intanethi lufanele ukuba bafune umsebenzi kwi-BC ukufumana amava ayimfuneko ekusebenzeni nabantwana. Elona candelo lilungileyo kukuba isifundo Abafundi banokuqala ikhosi xa ilungele bona, kwaye bayigqibe xa sele ilungile. Akukho xesha libekiweyo.
Emva kwentlawulo, abafundi bafumana i-imeyile eyamkelayo ngemiyalelo yokungena. Umfundi unokucofa ikhonkco kwi-imeyile ukuqala kwizifundo. Kukho ikhwizi zokuziqhelanisa nezifundo ngalo lonke ikhosi, kunye novavanyo lokugqibela oluninzi lokugqibela. Zonke iinxalenye zekhosi zigqityiwe kwi-Intanethi, kwaye akukho ziincwadi zomsebenzi zongezelelweyo ziyafuneka.
Emva kokuba ugqibe uviwo lokugqibela, abafundi baya kuthunyelwa i-imeyile isatifikethi sokugqitywa, esinokusetyenziselwa ukufumana indawo yokugcina abantwana enelayisensi.
Ikhosi yethu yaBantu abaDala abaDala kwi-Intanethi ikwaxhaswa yi-WorkBC. Oku kuthetha ukuba inkxaso-mali kurhulumente inokubakho ngamaziko emisebenzi asekuhlaleni ukuthatha le khosi. Abafakizicelo kufuneka babe ngabasebenzi abafuna umsebenzi kwaye bafake izicelo zokuba ngabathengi beziko labo lengingqi. Ndwendwela bethu Inkxaso-mali kaRhulumente iphepha leenkcukacha ezithe vetshe.
Ikhosi eyiNtloko yaBadala iyafumaneka
ngaphezu kweeLwimi ze100
Thatha ikhosi yeNtloko yaabantu abaDala eyiLwimi ekhethwe nguwe!
Sebenzisa umkhangeli zincwadi weGoogle Chrome,
kwaye ucofe iqhosha lokuguqula iorenji
phezulu kulo naliphi na iphepha.
Unokukhetha ukufunda ekhompyutheni ngolwimi olukhethileyo.
Cofa kwiqhosha elisezantsi ukujonga ikhosi kulwimi lwakho
Ividiyo yeKhosi yaBadala eyiNtloko
URoxanne Penner ungumnini weZiko lokuFunda le4Pillar lasePowell River, BC.
Ungumhlohli onelayisensi yokuQeqeshana kwaBantwana aBasaqalayo, umququzeleli wesifundo kunye nomqeqeshi we-ECE.
Usebenza njengomqeqeshi wosapho kwaye ebesebenza njengomzali okhulisa umntwana wenkonzo yakhe ngokusebenzisa iSebe labantwana kunye neentsapho ngaphezulu kweminyaka eyi-17.
URoxanne ufundise izakhono zekhosi yaBadala eyiNtloko ngokudibana nabantu kwiworkshop yomntu ngaphezulu kweminyaka eyi-10.
Ngoku le khosi iyafumaneka kwi-Intanethi kwabo ishedyuli okanye indawo ayibavumeli ukuba bathathe uqeqesho.
Ikhosi yethu yaBadala eyiNtloko ithathwa kwi-intanethi kuthotho lwezifundo ezinemizuzwana encinci. Isifundo siyaziphatha. Abafundi banokuqala ngalo naliphi na ixesha, kwaye babhale uviwo lokugqibela xa belungile. Ekupheleni kwekhosi, abafundi baya kuthatha uviwo lokuvula olungenamkhawulo lwe-Intanethi, kwaye baya kuthunyelwa nge-imeyile isatifikethi sokugqitywa. Amanqaku okupasa yi-70%, kwaye uvavanyo luyafumaneka ukuze kuphinde kuthathwe amanqaku aphumeleleyo.
Abathathi-nxaxheba kufuneka okungenani babe neminyaka eyi-19 babhalise, bagqibe zonke izifundo kwaye baphumelele iimviwo zokugqibela benamanqaku anelisekayo ukuze bafumane isatifikethi sekhosi sabantu abadala esigqibeleleyo.
Nceda uqaphele, umqeqeshi we-Roxanne Penner uzenza afumaneke nge-imeyile ngexesha lesifundo sakho ukuphendula nayiphi na imibuzo onokuthi unayo.
Ikhosi ekwi-Intanethi yokuPhononongwa
Ikharityhulamu yeKhosi yaBadala eluxanduva
Umntu omdala onoxanduva kwi-Intanethi Ikhosi ibilula kakhulu ukuba ubhalise kwaye uyigqibile! Ukususela ekuqaleni ukuya ekugqibeleni, izifundo zinolwazi kakhulu kwaye kulula ukuzilandela.
URoxanne njengomqeqeshi ube kuhle! Ubuye kwii-imeyile zam ngokukhawuleza kwaye wayehlala ekhona ukuze aphendule imibuzo yam xa ndinayo nayiphi na.
Eyona nto ndiyithandayo kakhulu malunga nezi zifundo yindlela ubunzulu bayo. Idlula nendlela yokusebenza nabantwana abaneemfuno ezahlukeneyo zempilo, endicinga ukuba zibalulekile kuye nakubani na oya ebaleni.
Emva kokuba ndigqibile ikhosi yaBadala yokuphendula kwaye ndithathe uviwo ndiziva ndinethemba lokuba ndiza kukwazi ukwenza umsebenzi wam omtsha ngokuqonda okungcono wokuba ngumntu othembekileyo onoxanduva.
Emva kokugqiba iKhosi yaBadala eyiNtloko, umfundi uyakufanelekela ukusebenza kunye:
Unonophelo Lwabantwana Esikolweni Isikolo (ilayisensi)
IZiko loKhathalelo lwaBantwana maxesha athile (linelayisensi)
Njengomnye ongena endaweni yabanye abambeleyo / endaweni yethutyana / umnxeba obiza abo baNcedisa ukuFundela abaNtwana abaDala kumaZiko anoLondolozo lwaBantwana aLayisenisiweyo okanye iZikolo zeSikolo sabaFundanga
Iinkqubo eziqhelekileyo zokuNxaxha kusapho kwiNkqubo, abaNcedisi boKhathalelo loSapho okanye ezinye izikhundla ezinxulumene noko
Ukuqala iZiko lokhathalelo loSapho
I-Nanny okanye i-Babysitting
Ikhosi ye-Intanethi $ 125
I-4Pillar yokuFunda kwangoko iyazidla ngokubonelela ngesiqinisekiso sokwaneliseka kwe-100% kwiKhosi yethu yaBadala eyi-Online.
Ukuba nasiphi na isizathu awonwabanga ngoqeqesho, siya kukubuyisela ngokuthenga kwakho ngokupheleleyo.
Nceda uqaphele, isatifikethi sokugqitywa asizukukhutshwa kwizifundo ezibuyisiweyo.
Ubungqina obuninzi babafundi
Ndincoma kakhulu uRoxanne Penner njengomqeqeshi wekhosi yabantu abaDala abaDala.
Ungumyaleli oqeqeshekileyo onomdla kakhulu onomdla ngokucacileyo kwintsimi asebenza kuyo. Bekumnandi ukunxulumana naye.
Ndithathe ikhosi yaBadala yokuphendula kwaye ndiyifumene inolwazi. URoxanne Penner wenza ukuba iiklasi zibe mnandi kwaye ukufunda ngendlela yakhe yokufundisa kwakuyimpepho.
Ndingacebisa kakhulu ukubhalisela le khosi.
Ikhosi ye-Intanethi yaBantu abaDala inoxanduva lokufunda elimangalisayo. Ndathanda ukuba uRoxanne afumaneke ukuba aphendule nayiphi na imibuzo endandinayo endleleni.
Ndifumene isatifikethi sam kungekudala emva kokugqiba ikhosi, eyayiluncedo ngexesha lokufaka kwam isicelo sokukhathalela umntwana.